Ho an’ny controle manokana dia nambaran’ny dokotera Fidy Bariniaina fa tena ilaina izy io amin’ny fanaraha-maso ny toe-pahasalamana. Amin’ny ankapobeny raha araka ny fanazavany hatrany dia natokana ho an’ireo olona nitsabo tena ka te-hahalala ny fivoaran’ny fahasalamany izy io. Jerena ao anatin’izany ny fahombiazan’ilay fitsaboana na tsia….ka raha nahomby dia tohizana raha tsy nahomby kosa dia mitady paikady hafa ny dokotera. Ho an’ny bilan indray dia ny olon-drehetra no tokony hanao azy amin’ny alalan’ny analizy hahafantarana ireo karazan’aretina ao anatin’ny vatana. Isaky ny herin-taona raha tara indrindra no tokony hanao izany ny olona iray na dia salama aza. Ho an’ny mpianatra ohatra dia tokony hanao izany izy ireny rehefa hiditra hianatra. Ho an’ny mpiasa ihany koa dia tokony hanao izany izy ireny mialohan’ny hidirany hiasa amina orinasa iray. Ny vehivavy mitady zanaka ihany koa dia tokony hanao bilan mialohan’ny hiterahany….Marihina moa fa tena ilaina ny fanaovana bilan, indrindra amin’izao fotoana fiparitahan’ny COVID 19 izao hahalalana ireo karazan’aretina miafina any anaty ka tsy hahafahana misotro ilay tambavy CVO ohatra…